I-Windsor 47 ft Yacht - Ukusetyenziswa bucala - I-Airbnb
I-Windsor 47 ft Yacht - Ukusetyenziswa bucala
Isikhephe sinombuki zindwendwe onguAdele
I-yacht entle kwindawo entle.. ukuhonjiswa okhilimu okuthandekayo okunefenitshala yesikhumba. Njengesikhephe sayo unokuhamba ngephenyane kwiindawo ezahlukeneyo.. Iziko leWindsor Town.. i-Windsenhead, i-Bray.
Ukukhanya okumnandi okunemibala eyahlukileyo ebusuku ukuze kubekho imeko entle. Iyafumaneka ukuze uhambe ngenqanawa emlanjeni uye eWindsor
Ayifumaneki ukuze uzikhuphe ngesikhephe. Into emangalisayo kukuba sibe nesikhephe ukuba sikhona ukuze sikuse kwisikhephe esihle
Isikhephe esikhulu kunazo zonke kwi-marina kwizithuthi eziyi-47 ft.. Kumnandi kakhulu ukuba abantu abayi-6 balale okanye ngaphezulu xa behamba ngesikhephe
Indawo engaselunxwemeni epholileyo nebukeka kakuhle kufuphi neWindsor kuMlambo iThames opholileyo. Indawo entle epholileyo. Iyafumaneka ukuba uhamba ngesikhephe nomntu otsibayo. Indawo yokupaka iyafumaneka.
Umbuki zindwendwe ngu- Adele
Hi there. We love to have you on our beautiful yacht and help you have an amazing experience. Nothing is too much to ask for. We love to arrange sailing for you and love having our past guests back to stay
Nceda undifowunele nangaliphi na ixesha ku-07770wagen
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$1103
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Windsor and Maidenhead